Shirka xiga ee guddiga howlaha guud ayaa daaran Jimco, Nofeembar 5, 2021. Kulankan waxaa lagu qaban doonaa Zoom.
Jadwalka Kulanka 2021
2021 Ajandayaasha Shirka
2021 Daqiiqado Kulan
Macluumaad dheeraad ah oo guddiga ah ayaa laga heli karaa bartayada Nagu saabsan .
Tababarrada Webinars ee 2021
Fiidiyowyada iyo bandhigyada PowerPoint ee dhacdooyinkan ayaa hadda laga heli karaa barta internetka Caawinaad Farsamo iyo Tababar .
10/12/21 - Wareegii codsiyada ee Dhismayaasha Broadband Construction Deeqaha Federaalku maalgeliyay ayaa la xiray. The goobta mashruuca la soo jeediyay iyo xawaaraha iyo Foomka Diidmada Codsiga ayaa lagu dhajiyay Maalgelinta Broadband shabakad
10 / 1 / 21 - Guddiga Hawlaha Guud ayaa hadda qoraya a Khabiirka Ganacsiga 5 - Agaasimaha Barnaamijka.
9/23/21 - Tilmaan dhammaystiran oo ku saabsan adeegsiga maalgelinta Koontada Mashaariicda Hantida Coronavirus (CVC-2) ayaa la sii daayay. Si loogu oggolaado codsadayaasha fursad ay dib ugu eegaan Dhismaha Broadband Tilmaamaha Codsiga Deeqda ee ay Dawladdu Maalgeliso iyo Tilmaanta Sanduuqa Mashaariicda Caasimada Coronavirus si loo hubiyo u hoggaansanaanta codsigooda, Guddiga Hawlaha Guud ayaa kordhiyay waqtiga kama dambaysta ah ee arjiga Dhismaha Broadband Deeqaha ay Dowlada Dhexe Maaliso ilaa Oktoobar 8, 2021.
8 / 24 / 21 - Shaqaalaha Boodhka Boodhka Hawlaha Guud ayaa qaban doona aqoon -isweydaarsi labaad oo codsi ah Sebtember 13, 2021 laga bilaabo 1:00 pm ilaa 2:00 pm si dib loogu eego su'aalaha badanaa la isweydiiyo. Fadlan iska diiwaangali aqoon isweydaarsigan dalwaddii si aad u hesho macluumaad cusub oo ku saabsan habka codsiga iyo tilmaamayaasha dhammaystirka arjiga guulaystay.
8/18/21 - Xafiiska Badhasaabku wuxuu sameeyey afar magacaabis oo cusub iyo hal dib -u -magacaabid Guddiga Hawlaha Guud:
Kelly Snyder, MPA waxay beddeshaa Erik Martin, PE oo ah wakiilka agaasimaha hawlaha guud oo uu magacaabay Ururka Dawladaha Gobolka Washington (WSAC).
Matthew Stevie wuxuu bedelayaa Mark “Bubba” Scott oo ah wakiilka PUD oo uu magacaabay Ururka Adeegyada Dadweynaha Washington (WPUDA).
Justin Clary, PE wuxuu beddelaa Sharafta leh Pam Carter oo ka mid ah wakiilada Ururka Degmooyinka Biyaha iyo Bulaacadaha Washington (WASWD).
Sharafta leh Lora Petso waxay beddeshaa Diane Pottinger, PE oo ka mid ah wakiilada Ururka Degmooyinka Biyaha iyo Bulaacadaha Washington (WASWD).
Mudane Dr. Jeralee Anderson, PE ayaa dib loogu magacaabay PWB mar labaad. Waxay wakiil ka tahay magaalooyinka Washington, oo ay magacowday Ururka Magaalooyinka Washington (AWC).
Guddiga Hawlaha Guud wuxuu jeclaan lahaa inuu soo dhaweeyo xubnihiisa cusub oo uu aqoonsado u -hibeynta iyo ka go'naanshaha heer sare ee xubnihiisa baxaaya.
8/6/21 - Kulankoodii bishii Ogosto, Guddiga Hawlaha Guud waxay ku ansixiyeen maalgelinta Barnaamijyadooda Dhaqan ee Deynta Dhismaha iyo Dhismaha ka hor. In ka badan $ 123 milyan ayaa la ansixiyay inta u dhaxaysa labada barnaamij. Si aad u hesho liiska qiimeynta iyo darajaynta ee codsadayaasha iyo si aad u aragto abaalmarinta, guji Dhismaha Hore or dhismaha.
7 / 14 / 21 - Guddiga Howlaha Guud wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo wareegtadooda codsigooda ee ku saabsan Broadband Dhismaha Deeqaha ay Maalgeliso Dowladda Federaalka oo furan laga bilaabo maanta illaa Oktoobar 1, 2021. Booqo annaga bogga ballaaran macluumaad iyo codsi.
6/4/21 - Dadaalka lagu xaqiijinayo tayada nolosha ee dadka degan Washington waa mid ay u maleynayaan dhammaan xubnaha sharci dejinta iyo Xafiiska Guddoomiyaha. Kulankoodii Guddiga ee Juun, Guddiga Hawlaha Guud wuxuu u aqoonsaday xubnaha sharci-dejinta ee soo socda inay yihiin Champions Kaabayaasha:
5/19/21 - The Soo bandhigida PowerPoint, oo ay ku jiraan qoraallada soo-jeediyaha, ee Barnaamijyada Dhaqanka ee Maanta Webinar ayaa hadda la heli karaa. Ku wax lagu qoro ee webinarkan ayaa sidoo kale loo heli karaa qulqulka.
5/12/21 - Guddiga Howlaha Guud tababaro bilaash ah oo bilaash ah oo loogu talagalay 2021 ayaa lagu dhawaaqay. Fadlan booqo kaayaga Kaalmada Farsamada bogga wixii faahfaahin dheeri ah iyo isdiiwaangalin.
5/11/21 - Guddiga Howlaha Guud wuxuu ku faraxsan yahay inay soo bandhigaan Wargeyska Spring 2021.
5/10/21 - Wareegga amaahda Barnaamijyada Dhaqanka ee Guddiga Hawlaha Guud hadda wuu furan yahay. Codsiyada waa la aqbalayaa barnaamijyada Dhismaha Kahor inta aan la gaarin Julaay 9, 2021. Barnaamijka Gargaarka Degdega ah wuu sii furnaanayaa had iyo jeer illaa inta lacagtu ka dhammaato. Booqo Bogga Maalgelinta Hawlaha Guud si aad u hesho macluumaad dheeraad ah iyo inaad dalbato.
5/4/21 - Barnaamijyada Dhaqanka ee Gudiga Hawlaha Guud waxay ku dhawaaqeen aqoon isweydaarsi codsi ah oo loogu diyaar garoobayo wareegyada amaahda ee la filayo 2021-23. Aqoon isweydaarsiga waxaa loo qorsheeyay Maajo 19 laga bilaabo 10: 00 illaa 11: 30, wuxuuna noqon doonaa mid muuqaal ah oo loo maro Zoom. Codsadayaasha suurtogalka ah waxaa lagu dhiirigelinayaa inay guji halkan si loo diiwaan geliyo.
4/23/21 - Isku soo wada duub waxyaabaha muhiimka ah ee mashruuca # EarthWeek2021 waa mashruuc ka socda magaalada Camas. Isku dheelitirka baahiyaha deegaanka, warshadaha, iyo degenaanshaha ayaa inta badan dhib badan. Markii ay Magaaladu eegaysay inay wax ka qabato baahiyaha gaadiidka ee aagga Waqooyiga Shore ee u dhow Lake Lacamas, waxay arkeen fursad ay ku aqbalaan caqabadan. Dhameystirka SR500 iyo Wadada Lake Lake waxay wax ka qaban doontaa baahiyaha socodka taraafikada; u oggolaanno horumarinta 460 hektar oo ganacsi, warshadeed, iyo dhul degaan ah; kordhinta nabadgelyada dadka lugaynaya; iyo in la xaliyo arrimaha biyaha duufaanka lagana hortago in biyaha duufaanka ee aan la daaweynin ay galaan harada.
4/22/21 - Ku soo dhowow # EarthDay2021! Anaga oo ku sii soconayna barnaamijyadeenna muhiimka ah ee # EarthWeek2021, waxaan eegeynaa degmada 'King County' Saldhiga Daweynta Cimilada Qoyan ee Georgetown (GWWTS).
GWWTS waa 70 milyan oo gallon maalintii bulaacada awooda iyo xalka biyaha roobka ee ay maalgaliso PWB, Ecology, iyo EPA. Waxay awood u siineysaa laba soo-bax bullaacadeed oo isku dhafan inay ku shaqeeyaan iyadoo la raacayo qawaaniinta deegaanka. Yaraynta hordhaca wasakhda ah ee webiga Duwamish wuxuu gacan ka geysan doonaa howlaha nadaafadda maxalliga ah ee marin biyoodka iyo soo kabashada deegaanka. Mashruucan, oo ku yaal goob hore oo bunfi ah, wuxuu dhaafsiisan yahay maaraynta arrin la yaqaan wuxuuna u jeedaa sii wadida iyada oo loo marayo dhaqammo sida leexinta walxaha qashin-qubka iyo yareynta isticmaalka kiimikada ee habka daaweynta. Intaa waxaa sii dheer, mashruucan ku guuleysiga Envision Platinum Award waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha isbeddelaya ee la xiriira isbeddelka cimilada oo ay ku jiraan laamiga la mari karo, saqaf cagaaran, iyo beero roob iyo berkedo.
4/21/21 - Maanta barnaamijkeenna # EarthWeek2021 oo ah farriin muhiim ah wuxuu diiradda saarayaa xarumaha dib u isticmaalidda biyaha Haddii ay beddeleyso heerka hadda jira, heerka socodka, iyo mugga biyaha wabiga, hoos u dhigista biyo-mareennada, ama wax ka beddeleysa baaxadda biyaha iyo xeebta harada, nidaamyada biyuhu waxay saameyn ku leeyihiin deegaanka deegaanka. Daaweynta iyo dib u isticmaalka biyaha ujeeddooyinka warshadaha, baahida loo qabo nidaamka biyaha maxalliga ah waa la dhimay. Tani waxay ka dhigan tahay in biyo yari laga soo jiiday biyaha, durdurrada, webiyada, iyo harooyinka iyadoo natiijadu ay saameyn yar ku yeelatay nidaamka deegaanka. Baahida la dhimay waxay sidoo kale ka dhigan tahay in goob ay iskeed isu sii wadi karto iyada oo aan la dhexgelin nidaamyada biyaha ee isku dhegan ama aan la kordhin cabirka iyo tirada ceelasha deegaanka. Tani waxay kordhineysaa faa iidooyinka isticmaalka tamarta oo yaraaday si loo helo biyo, fursadaha oo yaraada nidaamka cillad la'aanta iyo luminta biyaha, waxayna yareysaa saameynta aaska iyo dayactirka marinnada dheeriga ah ee biyaha.
Guddiga Shaqada Dadweynaha ee Washington waa shirkad sharaf leh oo maalgelin ku siisa magaalada Quincy horumarinta magaaladooda Dib-u-isticmaalka Biyaha Qashinka iyo Yaraynta Qulqulka Brine mashaariicda. Dhameystirka mashaariicdan waxay u oggolaanaysaa Magaalada inay isku dheellitirto baahiyaha ganacsiga, dalabaadka deganaanshaha, iyo awoodda maxalliga ah ee biyaha gudaha.
4/20/21 - Annaga oo sii wadna waxyaabahayaga muhiimka ah ee # EarthWeek2021, waxaan maanta eegeynaa amaah deg-deg ah oo la soo siiyay degmada Dooxada Dooxada Dooxada Dooxada ee sannadka 2019. Mashruucani wuxuu beddelayaa xoog weyn oo ka hooseeya Wabiga Duwamish kaas oo lagu rakibay 1986 iyada oo loo marayo qashin qubka. Divers waxay ogaadeen in asalka aasaasiga ah uu lumiyey wabiga jiingaddiisa waxayna la kulantay saameyn iyo baaraan. Natiijadu waxay ahayd laba jebin muhiim ah iyo jabka jiifka ah ee ugu weyn. Iyadoo loo marayo amaah ay bixiso barnaamijka Dhismaha Degdegga ah ee Guddiga Howlaha Guud, degmadu waxay ku rakibaysaa mid cusub Saldhigga Boeing - Isgoyska Webiga Duwamish Qasab ka dhig qodista jihada ee hubineysa ilaalinta midka ugu weyn, kana ilaalineysa marin biyoodka, xayawaanka, iyo dadka deegaanka ka soo baxa dheecaanka bulaacada aan la daaweyn.
4/19/21 - Waa # EarthWeek2021! Bixinta maalgelinta mashaariicda ilaalinta iyo soo celinta deegaanka ayaa ah mudnaanta Golaha Hawlaha Guud. Toddobaadkan, waxaan soo bandhigi doonnaa mashaariic dhawaan la maalgeliyay oo Washington u dhaqaajinaya mustaqbal cagaaran.
Maanta waxaan eegeynaa dadaalka magaalada Bremerton ee wax ka qabashada biyaha roobka. Magaalada waxay heshay maalgelinta Guddiga Howlaha Guud ee laba mashruuc oo la xiriira ceel-biyoodka sannadka 2018–Gorayada Creek iyo Basin Badeed. Mashaariicdani ma aha oo kaliya inay beddelaan qubrooyinka caqabadda ku ah marinka kalluunka, sidoo kale waxay qayb muhiim ah ka yihiin qorshaha dib-u-soo-celinta aagagga. Ujeedada qorshahani waa in la wanaajiyo tayada biyaha gobolka, in la yareeyo qulqulka biyaha, lana soo celiyo durdurradii deegaanka. Sunta wasakhda ah ee daadadka biyaha daadadka ee aaggan waxay keeneen xirnaanshaha joogtada ah ee sariiraha kalluunka laga soo bilaabo 1962. Iyadoo la dhammaystirayo qorshaha dib-u-soo-celinta berkeda ee aagga, Magaaladu waxay damacsan tahay inay soo celiso awoodda kalluunka lagu qaado ee durdurrada deegaanka, iyadoo si wax ku ool ah loo maareeyo biyaha daadadka, iyo in la yareeyo soo-gelinta wasakhda ku jirta badda waxayna awood u siineysaa in dib loo furo sariiraha kalluunka.